Ubani owabulala u-Elaine Herzberg? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > I-Uber ibulala owesifazane - izixazululo ezi-pragmatic
I-Uber ibulala owesifazane - izixazululo ezi-pragmatic
Ubani owabulala u-Elaine Herzberg?
ISUV ezishayelayo ishayisa umuntu ohamba ngezinyawo eTempe, e-Arizona. Isisulu, u-Elaine Herzberg, 49, wabulawa. Uyemukelwa kuTat's Trendingm nginguShiraLazar.
Le moto ibingasetshenziswa ngaleso sikhathi, kodwa ibihlolwa ngabakwa-Uber njengengxenye yohlelo oluzayo lokuzishayela. Empeleni, kwakukhona umshayeli wokuhlola umuntu emotweni, uRaphael Vasquez oneminyaka engama-44, yize iVolvo CX90 ka-2017 'yayisemodini yokuzimela' ngaleso sikhathi.
Uphenyo lusaqala, yize uVasquez kubonakala ukuthi wayengenaphutha. Imoto ayibonisanga zimpawu zokwehlisa ijubane ngesikhathi ishayisa uHerzberg ephusha ibhayisikili ngaphesheya komgwaqo. Amaphoyisa akholelwa ukuthi lesi sigameko besingenakugwemeka ngisho nomshayeli ongumuntu.
Bayazi ukuthi kulula ukusola amarobhothi kulezi zinsuku. Umphathi wamaPhoyisa aseTempe uSylvia Moir uthe: “Kucace bha ukuthi bekuzoba nzima ukukugwema lokhu kushayisana nganoma iyiphi indlela kuncike ekutheni iphume kanjani ezithunzini yangena emgwaqeni. Umshayeli uthe kufana nombani, lo muntu ungene ngaphambi kwabo.
Isexwayiso sakhe sokuqala sokushayisana kwakuwumsindo wokushayisana. ”Yize uphenyo lusaqhubeka, kodwa kubonakala sengathi amaphoyisa aseTempe asola isisulu. Futhi sifuna nje ukuqinisekisa ukuthi izakhamizi zethu ziphephile.
Uma kungenzeka, sicela usebenzise ukuwela idube lapho uwela umgwaqo. Akekho ofuna ukudlula kulokhu. Thina emnyangweni wethu, abaphenyi bethu futhi, ngiqinisekile, nomndeni nathi.
Ukusebenzisa ukuwela idube nakanjani kuzonciphisa lokhu futhi kuvimbele izehlakalo ezibuhlungu ukuthi zingaphinde zenzeke. Kodwa-ke, umbhali uJanette Sadik-Khan akanayo. Ubhale kuTwitter wathi: “Ukufa kokuqala kokungashayeli kwenkathi yokuzimela namaphoyisa sekuvele kusola isisulu. 'Ukuwela i-zebra crossing' akukaze kube izaba ezizwakalayo zokufa kwabantu emgwaqeni futhi akunikezi izinkampani ezizimele zokuhamba. ”Yize kunjalo, u-Uber umise izivivinyo ezimotweni ezizishayelayo ePhoenix, Pittsburgh, San Francisco naseToronto.
Futhi umphathi we-Uber ubhale ku-Twitter ukuthi, 'Ezinye izindaba ezidabukisayo ezivela e-Arizona. Sicabanga ngomndeni wesisulu njengoba sisebenza nabomthetho bendawo ukuqonda okwenzekile. ”Futhi noma ngabe imoto ezishayelayo ayinacala, kuseyindaba enkulu ngoba kungokokuqala ukuthi umuntu ohamba ngezinyawo abulawe yimoto ezimele.
Futhi kuphakamisa imibuzo eminingi ngoba sengivele ngicabanga ukuthi asiyethembi yonke le nto. Ukuphela kokufa okuxhumene nezimoto ezizishayelayo empeleni bekungumshayeli kuTesla ezimele ngo-2016. Futhi ngokuya ngemithetho emisha esanda kwethulwa uMbusi wase-Arizona uDoug Ducey, i-Uber ingabekwa icala ngokufa kukaHerzberg.
Noma kunjalo, ochwepheshe basakholelwa ukuthi izimoto ezizishayelayo ziyikusasa. Futhi hhayi kuphela ukonga imali, kepha ngokumangazayo nangenxa yezizathu zokuphepha. Ngokusho kukaprofesa wezobunjiniyela uPeter Hancock, izimoto ezizishayelayo ekugcineni kuzoba yindlela ephephile.
Uyabhala: 'Izibalo ezilinganisela ukuthi zingaki izingozi ezenzekayo kunzima ukuziphikisa: Kukholakala ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-90 ezingozini zezimoto e-US zibandakanya uhlobo oluthile lwamaphutha omshayeli. Ukususa leli phutha kungasindisa abantu abaningi njengezwe eminyakeni emibili. 'ilahlekile kuyo yonke iMpi YeVietnam. 'Noma ngabe kuphephe kangakanani, eziningi zalezi zinkampani zizobanenkinga yokuthengisa manje.
Ngokwenhlolovo yeReuters / Ipsos, ama-67% abantu baseMelika bebengeke bazizwe bekhululekile ukushayela imoto ezishayelayo. Futhi kwinhlolovo yeTwitter engaphansi kwesayensi, u-44% uthe abasoze bazishayela imoto ezishayelayo, kuyilapho u-29% uthe bazoyivivinya iminyaka eyishumi kuqala. Noma kunjalo, izimoto ezizishayelayo zisiza ngokushesha okukhulu.
IWaymo, insiza yokuzishayela ka-Alphabet yokuzishayela, iyahlola e-Arizona futhi ihlela ukwethula esifundazweni ngokuhamba konyaka. Ngibabonile eCES nakuzo zonke ezinye izingqungquthela nezingqungquthela lapho kufana negumbi lokuphumula lapho ungahlala khona futhi usebenze futhi ube nosuku. Kuhle impela.
Futhi ngicabanga ukuthi imishini namarobhothi kungenzeka aphephe kakhulu kunabantu. Ngiqonde ukuthi, phakathi kokuthumela imiyalezo nezinye izinto, angazi ukuthi sithembeke kangakanani, kepha ngicabanga ukuthi kuzofanele sisebenze ithani lamakhink ukuze silifikise endaweni sonke esenethezekile ngalo. Manje uma ngingangena nje ngithi yebo, ngizovele ngilale kancane, mhlawumbe angilali.
Lapho nginezingane, ngicabanga ukuthi zizophila impilo lapho izimoto ezizishayelayo ziyiyona nto. Uyazi, abazali bami babengenabo omakhalekhukhwini noma imithombo yezokuxhumana, futhi ezinganeni zami kuzofana nokuthi bangaba nezimoto ezizishayelayo. Ngabe wake washayelwa ngemoto ezishayelayo? Sazise kumazwana angezansi, njenge, bese ubhalisela okuningi kwe-Yini Okuthrendayo.
Futhi ukuthola izindaba eziningi, vakashela i- Whattrending.com.
Bangaki abantu asebeshonile okubangelwe yizimoto ezizishayelayo?
Umshayeli wetekisi u-Rafaela Vasquez, 44, wayesemotweni yesondo leVolvo XC90 SUV enezobuchwepheshe bokuzishayela ezihamba ngesichotho i-Uber yayihlola emigwaqweni yaseTempe, e-Ariz., NgoMashi 18, 2018, ngesikhathi eshayisa futhiwabulawaabahamba ngezinyawoU-Elaine Herzberg, 49.
Izinkampani eziningi kunanini ngaphambili zizama ukuletha izimoto ezizishayelayo kubantu. Kodwa-ke, imoto ezimele ngempela ayikabikho. Futhi akucaci ukuthi ikusasa lethu elingenamshayeli lizofika nini noma nini.
Abaxhasi abanjengo-Elon Musk bamemezele uhlelo olunolaka, kepha baphuthelwa izinhloso zabo, kanti abanye embonini nabo baphuthelwa ukuqagela. Inhloso yethu ukusebenzisa lezi zimoto ngo-2019. Ngakho-ke unenketho yokungashayeli.
Ngeke kwenzeke ngo-2020. Kuyenzeka namuhla. Besifuna ukungena.
Sikuphi ngempela ngezimoto ezizishayelayo? Futhi singalindela nini ukuthi zibe yingxenye yokuphila kwethu kwansuku zonke? Isimo esikhona manje sezimoto ezingashayeli sithakazelisa kakhulu ngoba sesidlulile izinga eliphezulu futhi sikulokho okwaziwa ngokuthi yi-Valley of Disenchantment kwenzeka. Lokho kusho ukuthi, ngisho nabantu abakule mboni bathi, gee, kuvela ukuthi kunzima kakhulu kunalokho ebesikucabanga. Empeleni asicishe sifinyelele lapho abantu abaningi babecabanga ukuthi bekuzoba khona eminyakeni emithathu eyedlule.
Kepha ngicabanga ukuthi kube nokujova kwangempela kweqiniso ezinyangeni eziyi-18 kuya kwezingama-24 ezedlule. Mhlawumbe unyaka noma emibili eyedlule bekunomuzwa wokuthi ama-algorithms ethu mahle kangangokuba sikulungele ukuletha izimoto ezingashayeli emakethe. Futhi kusobala ukuthi bekunalezi zingqinamba ezivela kubantu ababulewe noma ezingozini ezenzekile, futhi manje sesiqaphe kakhulu.
Abadlali abaningi abakhulu baqale ukubuyisela emuva ukubikezela kwabo ukuthi kungekudala singabubona kanjani lobu buchwepheshe. Ngisho nesikhulu sangaphandle sikaWaymo sivumile ukuthi umkhuba ozungeze izimoto ezizishayelayo usungalawuleki. Ubuchwepheshe buhambe ibanga elide, kodwa kuningi okusamele kwenziwe.
Kukhona ukuqonda, i. H. ukusetshenziswa kwezinzwa ukuthola ukuthi yini ezungeze imoto eseduze kwemoto.
Ukuqagela ukuthola ukuthi laba basebenzisi bomgwaqo bazokwenzani ngokulandelayo kumasekhondi ambalwa alandelayo kuyizinkinga ezinzima ngempela ukuxazulula. Izinkampani eziqhuba ngokuzimela namuhla zithatha izindlela ezimbili ezijwayelekile. Abanye bakha imoto ezishayelayo kusuka ekuqaleni.
Abanye bakhulisa ubuchopho obunikeza amandla imoto. Umholi wokuqala kwakunguGoogle, owethula iphrojekthi yakhe yemoto ezishayelayo ngo-2009. Eyaziwa namuhla njengeWaymo, inkampani ithuthukisa i-hardware ne-software engasebenza njengobuchopho emotweni ezishayelayo.
I-Aurora ithatha indlela efanayo. Isungulwe ku-2017 ngabadlali bokuqala abavela ku-Uber, Tesla, nasezinhlelweni zokuzishayela zeGoogle, isivele inikeze imali engamaRandi ayizigidi ezingama-620 evela ku-Amazon nakwabanye abatshalizimali abaziwayo. I-Aurora ihlola izimoto emgwaqweni ePittsburgh, ePennsylvania nangaphandle kweBay Area.
Asivumeli umphakathi ungene ezimotweni zethu okwamanje. Izimoto zethu zisemgwaqweni, sinabashayeli bethu bokuhlola ababili lapho. Ubuchwepheshe esibakhayo bungagijimisa noma yini kusuka emotweni ehlangene kagesi kuye evenini enkulu kuya elolini elikhulu, elihamba ibanga elide.
I-Argo AI ne-Aptiv yizibonelo zezinye izinkampani ezithatha indlela efanayo. ILyft manje ibuye ithuthukise izinhlelo zayo zokuzishayela futhi ihlinzeka ngokugibela ukuzishayela kuhlelo lwayo lokusebenza ngokubambisana ezindaweni ezikhethiwe. Ukuzishayela kukhulu kakhulu kunkampani eyodwa nomzamo owodwa.
Futhi uma ubheka isu lethu, ngakho-ke sisebenzisana nabalingani epulatifomu evulekile i-Aptiv neWaymo futhi sakha ubuchwepheshe lapha. Izinkampani ezinjengoTesla, Zoox noGM ezinama-cruise division zakha izimoto zazo. Ngenhloso yezimoto ezizishayelayo ezingasetshenziswa kuzo zonke izindawo.
Le yinselelo yezobuchwepheshe yesizukulwane sethu. Siphakamise imali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-7.1.
Sinokuhlanganiswa okujulile neGeneral Motors neHonda, esikholwa wukuthi kumqoka ekwakheni izinhlelo zokuphepha ezibaluleke kakhulu futhi sizakhe ukuze zisetshenziswe ngezinga elikhulu kakhulu. ICruise, eyathengwa yiGeneral Motors ngo-2016, ihlolisise izimoto zayo eSan Francisco ezinabashayeli bezokuphepha. Ukukunika umuzwa womehluko phakathi kokushayela amadolobha kanye nalokho esikwenzayo emigwaqweni yaseSan Francisco nsuku zonke.
Izimoto zethu, ngokwesilinganiso, zibona umsebenzi omningi ekushayeleni umzuzu eSan Francisco kunalokhu ezikubona kuhambo lwehora e-Arizona. IZoox isebenzela ukwakha itekisi elizishayelayo elizonke-in-one ngaphansi kokuqondiswa kwesiphathimandla samasu esikhulu se-Intel ngezinhlelo zokuqala ngo-2020. Esikhundleni sokuphinda ufake izimoto ezinezinzwa namakhompyutha bese uthi, sawubona, lokhu ukushayela imoto.
Sikholelwa ukuthi kunethuba lokwakha uhlobo olusha lwemoto olwaklanywa kusukela ekuqaleni ukuhambisa abantu ngokuzimela. INissan neTesla bobabili banezinhlelo ezizimele emigwaqweni namuhla. I-Teslas ibilokhu i-beta ezimotweni zayo kusukela ngo-2015 futhi abashayeli baziwa ngokusebenzisa uhlelo lwamanje ngaphandle kwezandla.
Isoftware kaTesla ethembisayo ezimele ngokuphelele yokushayela iseduze kwekhoneni kuzoqina, kepha kusabukeka sengathi okungenani sizosebenzisa isici esilinganiselwe ngokusebenza okugcwele kokuzishayela kuhlobo lwe-Early Access kulo nyaka. Ngicabanga ukuthi uTesla empeleni usemuva kakhulu kunalokho umhlaba angathanda ukukuholela ekukholweni ngoba empeleni bakhawulelwe kakhulu uma kukhulunywa ngehardware yabo. Abanye bakha ama-shuttle okuzishayela ahamba kuphela emizileni ethile noma agxile emalolini emigwaqweni emikhulu.
Futhi-ke kunezinkampani ezinjengeGhost neComma.ai ezisebenza kuma-aftermarket kits. Ngokuyinhloko i-Hardware engakhiwa ezimotweni ezindala ukubanikeza amakhono amasha wokuzimela okuzenzakalelayo ngolunye usuku.
Indlela yabo bonke abalingisi kule ndawo Ikusasa ligcwele izinselelo. Induna phakathi kwabo ifakazela ukuthi ubuchwepheshe buphephile. Izinhlelo ezingashayeli kufanele zihlangabezane nezinga eliphezulu kakhulu lezokuphepha okumele libe ngcono kunomuntu ngaphambi kokuthi lisetshenziswe ngezinga elikhulu.
Azikho izindinganiso zikahulumeni noma izinqubo zokuhlola zezinhlelo zokushayela ezizenzakalelayo e-US namuhla, kepha kube nezingozi ezibulalayo. Owesifazane ogama lakhe lingu-Elaine Herzberg ubulawe yi-Uber ezimele ngomshayeli wezokuphepha onganaki owela umgwaqo, ehamba ngebhayisikili lakhe, bekungabonakala kalula ngemoto ezimele, engagijinywanga. Akekho owanyathela amabhuleki.
Ku-2016, umlandeli kaTesla ogama lakhe linguJoshua Brown ushone engozini ngenkathi esebenzisa i-autopilot hands-free eFlorida. Ezinye izingozi ezibandakanya ohamba ngezimoto okwamanje ziyaphenywa. Noma kunjalo, imboni inethemba lokuthi izimoto ezizimele zizokwenza imigwaqo iphephe kakhulu kunanamuhla.
Ngempela, uhlobo lwe-zero umzuzwana embonini luzoba lapho singakususa lokho kuphepha, umshayeli ephephile futhi nemoto ingaqhutshwa ngaphandle kwabantu. Abanye, njengo-Elon Musk, bathe cishe akunankinga ukungabi nalezi zimoto ngaphandle ngoba ziphephe futhi zizophepha kunabashayeli babantu. Noma singasho ukuthi imoto ezimele ingcono kunesishayeli esingumuntu, akusho ukuthi imoto ezimele ingcono kunesishayeli esingumuntu kanye nazo zonke izinhlelo zokuthuthuka ezinabashayeli esinazo.
Lapho sibheka ukuthi ubuchwepheshe bungabe sebukulungele empeleni yini, enye yamamethrikhi asemqoka afakwa yizinkampani inombolo yamamayela aqhutshwa, kepha akuwona wonke amamayela akhiqizwa ngokufanayo lapho kuhlolwa amasistimu azenzakalelayo. Ungathatha imoto ezimele uhambe ngayo, uyibeke kujantshi ovundlile noma umgwaqo oqondile nje, futhi ungashayela amamayela ayizigidi eziyikhulu. Kepha lokho akukutsheli okuningi ngokuthi lolu hlelo lusebenza kahle kanjani ngoba alubheki izinto eziyinselele empeleni endaweni yokushayela.
Ukuhlola izimoto ezizishayelayo emigwaqeni yomphakathi akwanele. Babhekene Nazo Zonke Izimo Ezicatshangelwayo Amabhizinisi ancike ekulingiseni. Singadala izimo esingasoze sazibona noma esingaziboni kakhulu.
Isibonelo, sifuna ukulingisa okwenzekayo lapho ibhayisikili lishayela ezimpambanweni zomgwaqo, ligijima phezu kwerobhothi elibomvu bese lishayisa ohlangothini lwemoto yethu. Kuvela ukuthi lokhu akwenzeki kaningi emhlabeni wangempela, kepha sifuna ukwazi ukuthi izimoto zethu zizokwenza okuthile okuphephile uma lokhu kwenzeka. Ngokuyisisekelo, vumela imoto ukuthi izijwayeze emafini kunokuba iqhubeke emgwaqweni.
Uma uvivinya izimoto ezizimele emigwaqeni yomphakathi, hhayi kuphela abantu abahamba ngaleyo moto beyingxenye yesilingo, kepha nawo wonke umuntu oseduze kwakho. Futhi abavumanga ukubamba iqhaza esivivinyweni. Ngihlala ngikhathazekile ngokuthi abantu basetshenziswa njengezidumbu zokuhlola.
Esikhundleni sokuzenzela isitifiketi kanye nokususwa komthetho, ngithanda ukubona imithetho eqinile, ezimele yokuphepha evela kuziphathimandla namuhla. Indlela yokuziqinisekisa ayisebenzanga kahle neBoeing 737Max 8 futhi manje iBoeing ikhokha inani. Kufanele sisithathe ngokungathi sína lesi sifundo uma kukhulunywa ngokuhlonza indlela engcono yokusebenzisa izimoto ezizimele.
Izishayamthetho zibambe ukulalelwa kwale nyanga ukuthola ukuthi ungawugcina kanjani uphephile umphakathi ngaphandle kokubambezela ubuhlakani bokuzishayela. NgoSepthemba, iNational Highway Traffic Safety Administration yakhipha imihlahlandlela emisha yenhlangano yezinhlelo zokushayela ezizenzakalelayo. Kodwa-ke, lokhu okwamanje yiziphakamiso zokuzithandela kuphela.
Umthetho wombuso uthuthuke kakhulu. Ngo-Okthoba, izifundazwe ezingama-41 zase ziphasise imithetho noma zasayina izimiso ezilawula izimoto ezizimele. Njengoba kunezinkinga zokulawula ezisondelayo, akumangazi ukuthi izinkampani ezizishayelayo ekuqaleni ziyaqaphela, futhi eminyakeni embalwa ezayo ukusetshenziswa kwazo kuzoncipha ezindaweni ezithile lapho kunokuqiniseka khona ukuthi ubuchwepheshe bungasebenza.
Ngicabanga ukuthi sizobona ukusetshenziswa okulinganiselwe kwezimoto ezizishayelayo eminyakeni emihlanu ezayo noma ngaphezulu. Uzozibona lezi zimpahla ezihambayo futhi uzozibona zihambisa abantu, kepha uzozibona ngqo kuzicelo zemikhumbi. I-Aurora ithi amasistimu ayo angahlanganiswa kunoma iyiphi imoto, kusuka kumabhasi amatekisi kuya kumaloli adonsa isikhathi eside.
Izindleko zobuchwepheshe bokuzishayela zingenye into ebalulekile ekusetshenzisweni kwazo. Iningi labathengi alisoze laba nezimoto ezizimele ngokweqiniso ngoba ubuchwepheshe buyabiza futhi kunezinkinga eziningi maqondana nesikweletu somkhiqizo nokuqinisekisa ukuthi zigcinwa kahle nokuthi izinzwa zilinganisiwe. Lesi ngesinye sezizathu zokuba abagibeli bezinsizakalo zokugibela uLyft no-Uber bagxumele kulo mdlalo.
Sinezinhlelo ezimbili ezizimele. Enye yipulatifomu evulekile lapho sixhuma khona abagibeli beLyft ezimotweni ezizishayelayo zozakwethu. Futhi yi-Aptiv eLas Vegas naseWaymo eChandler, e-Arizona ubuchwepheshe obubonayo lapha okuyileveli yesi-5.
Njengoba izinkampani ze-AV zisondela eduze kombono womphakathi jikelele, ukumane uqonde ubuchwepheshe sekube esinye isihloko esingathinta inqubekela phambili. Abanye, ikakhulukazi embonini, benze kabi umphakathi ngokuqhakambisa ubuchwepheshe ngaphambi kokuba bube khona - akukacaci kubantu abaningi ukuthi sisho ukuthini uma sithi imoto engenashayeli. IWaymo neGeneral Motors Cruise Automation basondele kakhulu ekubeni nalokho abakubiza ngezimoto ezingeni lesihlanu isikhathi esiningi.
Ngamanye amagama, ngokomqondo bangasebenza ngokwabo. Kepha kuze kube manje kubonakala sengathi basebenza njengomshayeli wemoto oneminyaka engama-intshi angu-15 enethemba lokuthola ilayisense yokushayela. Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi ungathenga izimoto ezizimele namuhla, ikakhulukazi lapho ungaphuma uyothenga imoto, uthenge inketho ezibiza ngokuzishayela ngokuphelele, futhi uyikhokhele, ulindele ukuthi ibekhona ngempela.
Futhi iqiniso ukuthi, alikho namuhla. Ngesheduli engaqinisekile nomlando wezinhloso ezigejiwe, ukudideka komphakathi akumangazi. Ngaphandle kwentuthuko enkulu, izinkampani eziningi sezibonile ukuthi kusekusele iminyaka eminingi ukuba sizethembe ngokweqiniso.
Ukushayela imoto njengengxenye yempilo yethu yansuku zonke. Umbuzo omkhulu uthi imoto izobe isilungile nini? Kufanele ubambe kahle zonke izimo nazo zonke izimo imoto okufanele ibhekane nazo. Futhi lokho kuthatha nje isikhathi.
Silindele ukuthi imoto esezingeni lesi-4 izokwenzeka ngamanani amancane eminyakeni emihlanu ezayo. Futhi lokho kusho ukuthi cishe uzobona amakhulu noma mhlawumbe izinkulungwane zezimoto eziletha amaphakheji noma ezihambisa abantu endaweni, noma mhlawumbe ezihambisa izimpahla emigwaqweni yethu emikhulu. Futhi manje nochwepheshe bayanqikaza ukuthembisa ukuthi ukuzishayela kwangempela kuzofika nini.
Umuntu ngaso sonke isikhathi kufanele acabange ukuthi umsebenzisi uzothola indlela yokusebenzisa kabi ubuchwepheshe. Thatha okubi kakhulu bese uyiklama. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha ukukhuthaza ubuchwepheshe kakhulu, ukuyenza ngokweqile uma kusengumsebenzi oqhubekayo.
Lokhu yinto okumele siyenze nomphakathi, nomphakathi, hhayi nomphakathi. Futhi sikuthatha ngokungathi sína lokho. Sakha izinhlelo zokuphepha ezibucayi ezizoba nomthelela omuhle kakhulu ezimpilweni zabantu.
Futhi isisho sobuchwepheshe sokwenza izinto ngokushesha nokusabalalisa izinto ngokuqinisekile asisebenzi kulokho esikwenzayo lapha.
Kwenzekani ku-Elaine Herzberg?
Noma kunjalo, uTesla uthi ezabouqobo-ukushayela izimotoziphindwe kane kunokujwayelekileizimoto; ngenkathi ikumodi ye-Autopilot, kulinganiselwa ukuthi kushona umuntu oyedwa ngamamayela ayizigidi ezingama-320 aqhutshwa.
Ngabe kukhona obulewe yimoto ezishayelayo?
U-Elaine Herzberg, oneminyaka engu-49 ubudala, washayiswa yimoto ngesikhathi ehamba ngebhayisikili enqamula umgwaqo eTempe, e-Arizona, ngo-2018. Ingozi kwaba ukufa kokuqala okurekhodiwe okubandakanya imoto ezishayelayo, kwaholela nokuthi u-Uber aqede ukuhlolwa kwayo. kwezobuchwepheshe e-Arizona.
Ngokomqondo, ake sicabange ukuthi zonke izimoto zikwazi ukuzimela ngokuphelele, okusho ukuthi zonke azishayeli. Lokho kuzokwenza okuhle okuningi, njengokunciphisa ithrafikhi nezingozi emaphutheni abantu. Ngeshwa, akuzona zonke izingozi ezisuswayo.
Lezi zimoto zingabhekana nenkinga yokuziphatha; ake sithi umndeni ushayela ezimpambanweni zemoto ozishayelayo bese kuthi kungazelelwe ingane iwele, kodwa sekwephuze kakhulu ukushaya amabhuleki kungaqhuba nokubulala ingane ukusindisa umndeni. Ngakho-ke lena yimibuzo esizoxoxa ngayo namhlanje. Nginomngani wami uJosh kuSkype ozojoyina ingxoxo.
I-MIT idale lokhu kuhlolwa kokuziphatha okuyinkinga kokuziphatha. Sinikezwa ngezimo ezi-2. Singabulala abahamba ngezinyawo ukusindisa abagibeli noma singababulala abagibeli ukuze sisindise abahamba ngezinyawo.
Ehlangothini lwesithombe kunezincazelo ezincane zabantu ofuna ukubabulala. Kukhona nesici sokuthi bawelewe ngokusemthethweni noma ngokungemthetho. Ake siqale.
Ngakho ngakwesobunxele yintombazane, umgijimi wesilisa, indoda engenakhaya kanye nesigebengu. Ngakwesokudla sinentombazane, umsubathi, indoda engenakhaya, isigebengu kanye nekati. Kukhona futhi into eyengeziwe.
Laba bantu bashayela ngokusemthethweni. Unento encane eluhlaza. Okokuqala, kungani bonke bengena? Imoto, KULUNGILE, ngakho-ke sinomsubathi wesilisa nendodakazi yakhe.
Ubona umfana ongenakhaya. Intombazane ifana nokuthi ngifuna ukuyisindisa. Uyamqukula bese uyamqhuba uvele uqhamuke erobhothini bese isigebengu sidonsa isibhamu sithi ngingena emotweni yakho manje.
Uthi futhi. Nginekati lami. Mayelana nawo wonke umuntu kwesokunxele nakwesokudla.
Kuyafana, kepha kukhona ikati. Abantu abawela umgwaqo ngokusemthethweni. Kimina ikati aliyona indawo yokushintsha.
Laba bantu bawela ngokusemthethweni. Ngithi imoto izogingqika iyoshayisa u-Yebo, ngiyavuma. Ngisho, angizwani namakati.
Nami angizwani namakati. Hewu Nkosi yami. Ngakwesobunxele indoda nomsubathi bese kwesokudla kube ngowesifazane nomsubathi.
Ngakho-ke ngokufanayo ziyefana. Bangobani abasubathi, ngoba lokho kuya ngokuthiya. Uma bengabadlali bethenisi singababulala, kepha uma bedlala igalofu, oh nkosi.
Njengoba abesifazane bewela ngokungemthetho, banakho, ngiyavuma. Ngisho, kuyinto enzima kakhulu ukwahlulela njengoJay ehamba, kodwa esimweni esifanayo lapho lokho kungukuphela kwento enqumayo. Yebo kunjalo, ngaphandle kokuthi ungumdlali wegalufu ngempela.
Ushiye abesifazane abathathu abade nendoda. Ngakwesokudla umgijimi, abesifazane ababili nomsubathi wesilisa. Ngokuya ngombuzo owodwa, sihlolisise umbuzo wokuqala - imoto kufanele yeqe futhi abagibeli kufanele bafe Imoto ayenzi lutho olungekho emthethweni.
Hawu ndoda, kunzima lokho. noma? Kungani ngiba nesikhathi esinzima kunawe? Ngicabanga ukuthi njengoba bewela ngokusemthethweni into ebucayi okufanele bakhathazeke ngayo manje. Manje sesinesigebengu nomyeni noma udokotela nonkosikazi okhulelwe.
Zenzeka ngokungemthetho. Kuthiwani uma isigebengu senze into embi kakhulu. Ubulale abantu ababalelwa ku-50.
Lo mphakathi nalo mphakathi wethiyori kukwenza isigebengu. Kimina, ngenxa yemisebenzi yabo efanayo nomsebenzi wempilo yabo, ngiyazi ukuthi imoto ayikwazi ukusho ukuthi yini imisebenzi yabo. Akunakwenzeka.
Ukube bengilawula le moto, bengizokhetha ngobuqotho isigebengu nendoda ukuthi ife. Ngingavuma. Hhayi bo izingane? Udinga ukuletha izingane? Yima.
Kukhona abesilisa nabesifazane abaningi e-United States. Kungaba umhlaba noma i-United States, kunabesifazane abangama-51% nabesilisa abangama-49%, kepha i-Iforget uma kuyi-USA noma umhlaba. Kususelwa kulokho.
Angazi, kulungile. Kunzima lokho. Ukube bengazi ukuthi ngubani ohlakaniphile, ngubani ingane engiyithandayo, bengingakhetha.
Njengoba bebaningi abesifazane kunabesilisa, kufanele kube njalo. Kulungile, ngakho-ke ngifinyelele esiphethweni esifanayo, kodwa ngenxa yezizathu ezihluke ngokuphelele. ubulili abunandima ekubonisaneni kwami.
Omunye wabantu emotweni usekhulile futhi omunye wabantu abahamba ngezinyawo ukhulelwe. Kulungile, akusho ukuthi bawela ngokusemthethweni noma ngokungemthetho, kunzima kakhulu. Hhayi cha, ngingaBantu emotweni bakhethe ukufa.
Owesifazane osekhulile, wayenesikhathi empilweni yakhe. Ngeke ngivume. 4 impilo vs. 3.
Le ntokazi ikhulelwe, kepha kulesi simo esibandayo, esinzima, nesingathetheleli. 4 vs. 3 futhi kufanele imoto ibeke phambili abagibeli bayo esimweni esifanayo. elula. ngithanda amachwane. ngiyaxolisa kodwa kumele bahambe kanjani. yebo abantu abafanayo be-4 vs. abantu aba-5. kukhona indoda endala kuzo zombili.
Kokubili umsubathi wesilisa. Kokubili kukhona umuntu omkhulu futhi kubo bobabili kukhona umfana. Umehluko kuphela ukuthi kukhona nomsubathi ngakwesokudla.
Lokhu kulula futhi. Khetha eyodwa enabantu abaningi, akunjalo? Ngingakusho lokho. Ukuze uphile kahle.
Yebo, ukuze uphile. Woza. Kulungile, ubuyele emuva enkingeni lapha.
Zibulale izilwane. Unakho lokhu, uJosh uyazizonda izilwane. Kulungile kokunye kwama-athikili wakho wokugcina lapho uthe uzokwenza khona ngiyaxolisa bantu abadala.
Ubunesikhathi sakho Uwela ngokungemthetho futhi usemdala. Yilokhu okutholisela i-jaywalking. Kulungile 2 abantu abangenamakhaya, isigebengu nendoda ngakwesobunxele.
Ngakwesokudla sinodokotela wesilisa, abesifazane ababili, udokotela wesifazane. 4 no-4 yebo. 4 no 4 futhi bawela ngokungemthetho.
Lo mbuzo ngizowusekela ekutheni ngubani obambe iqhaza elikhulu emphakathini futhi kufanele kube ngudokotela wesilisa, udokotela wesifazane kanye nabesifazane ababili. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kufanele baphile bese-ke abantu be-2 bengenamakhaya, isigebengu esisodwa nendoda eyodwa. Uxolo ndoda engathi angazi ukuthi wenzani, kepha awusazi.
Ngididekile kancane. Yebo, ngiyavuma. Ngu-5 vs. 5.
Kufanele ufe. Labo Jaywalker nawe awunazo izaba zaleyo nsizwa endala yize sanquma ukumbulala. Kwaba ukuphela kwendaba.
Sithole ukuthi uJosh ungumuntu owesabekayo cha, ngakho-ke ngithemba ukuthi uyithandile le ndatshana. Ngizokubona ngokuzayo. hlala psyched.species preference.abantu besilisa.
Uqinisekile ukuthi lokhu kuvela ku-MIT? Bheka, iku-MIT.edu. Kungani bethi bangamahosha? Ama-Hoomans
Ngubani okumele aboshwe uma imoto ezishayelayo ishayisa?
Ngubani onesibopholapho auqobo-ukushayela imotokubangela iingozi?Californiaisimo sephutha ngezinhloso zomshuwalense njengoba kuhlobeneizingozi zemoto. Ukuze ube nesimangalo esivumelekile, ngakho-ke, okunyeumshayelikumele itholakaleonomthwalo wemfanelongokubangela i-ingozi.
Ngabe zigqekezelwa izimoto ezingashayeli?
Abanye ochwepheshe babikezela ukuthi cishe i-750,000izimele-siveleizimotoizoshaya imigwaqo ngonyaka ka-2023, okusho ukuthi bayoba sengozini yokuhlaselwa. Lokho kubonisa, ngokulinganisela okuthile, ngaphezu kwezingxenye ezimbili kwezintathu ze-izimotoemgwaqeni, kugcwele izindawo zokuhlasela zombili ezaziwayo hhayi.18.08.2020
Yiziphi izifundazwe ezisemthethweni zezimoto ezizishayelayo?
Amashumi amabili nesishiyagalolunyeuthiI-Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Nebraska, New York, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, ITexas, Utah, Virginia, Vermont, Washington kanye
Iyimalini imoto engashayeli?
Okugcwele kukaTeslaUkuzishayelainketho, okwamanje enika amandla izici ze-Autopilot njengokushintsha imizila emigwaqweni emikhulu naku-othomathikhiimotoukupaka, manjeizindleko$ 10,000, noma $ 2,000 ngaphezulu kunangaphambili.
Ziyini izinkinga ngezimoto ezingashayeli?
Ngokugcweleimoto ezimeleidinga isethi yezinzwa ezithola ngokunembile izinto, ibanga, isivinini njalonjalo ngaphansi kwazo zonke izimo nezindawo, ngaphandle komuntu odinga ukungenelela. Isimo sezulu esine-Lousy, isiminyaminya sezimoto, izimpawu zomgwaqo ezine-graffiti kuzo zingathinta kabi ukunemba kwamandla wokuzwa.30. 2020.
Ngabe i-Tesla autopilot iyama kumalambu abomvu?
EzikaTeslaisici esisha esikhulu:Ukuzijamelamanje kumiswa izimoto eamalambu abomvufuthiImaizimpawu. Njengoba u-Electrek ebika, isici esisha se-UkuzijamelakushoAma-TeslasifakweUkuzijamelamanje sesizokwazi ukuphatha ezimpambanweni zemigwaqo.27.04.2020